प्रदेश नम्बर ७ मा एकाबिहानैं भुकम्प ! [विज्ञहरु भन्छन : यो महाभुकम्पको संकेत हो] - MONGOL KHABAR
प्रदेश नम्बर ७ मा एकाबिहानैं भुकम्प ! [विज्ञहरु भन्छन : यो महाभुकम्पको संकेत हो]
बैतडी । नेपालमा विगतमा गएको महाभुकम्पपश्चात लगातार धक्का आउँने क्रम जारी रहेको छ । महाभुकम्पको झण्डैं तीन वर्ष वितिसक्दासमेत्त यसरी धक्का आइररहनुले नेपाल अझैं खत्तरामा रहेको आंकलन हुने गरेको छ । वि.सं. २०७२ लाई अझैं पनि नेपालीहरुले बिर्सेका छैनन । हरेक नेपालीहरुको मनसपटलमा आज पनि त्यही बैशाख १२ को दिन रहेको छ । यो बिचमा बैतडी र दार्चुलामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।
भारतीय भुर्गभविदहरुले दावी गरेका छन कि नेपालमा अझैंपनि एक महाभुकम्प आउँन सक्छ । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको खेला केन्द्रबिन्दु भएर गएराति गएको भूकम्पको धक्का बैतडी र दार्चुलामासमेत महसुस गरिएको हो । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख दिपक बस्नेतले गएराति १० बजेर १ मिनेटमा ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको बताए । भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।